यी नर्स जसले ५ हजार जनालाई सुत्केरी गराइन् तर आफै सुत्केरी हुँदा संसार छाडिन् – Sandesh Press
November 17, 2021 129
३८ वर्षीया नर्स ज्योति गवली भारतको महाराष्ट्र राज्य, हिंगोलीको सिभिल अस्पताल, कार्यरत थिइन् । वितग ५ वर्षदेखि त्यहाँको प्रसूती वार्डमा कार्यरत नर्स ज्योतिले त्यसअघि विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा काम गरेका थिइन्।
५ वर्ष उक्त अस्पतालको प्रसूति वार्डमा काम गर्दा उनले ५ हजार भन्दा बढी महिलालाई सुरक्षित सुत्केरी गराएको उनका सहकर्मीले बताएका छन् । जब उनी आफैँ सुत्केरी भइन् । उनले यो संसारबाट विदा लिइन्।
ज्योतिले २ नोभेम्बरमा आफूकार्यरत हिंगोली सिभिल अस्पतालमै दोस्रो सन्तानलाई जन्म दिएकी थिइन् । श’ल्यक्रि’यामार्फत उनले सन्तान जन्माएकी थिइन् । उनी सुत्केरी हुने अघिल्लो दिनसम्म पनि ड्यूटीमा आएकी थिइन् ।
सुत्केरी भएपछि उनको निरन्तर रक्तश्राव भयो । अनेक प्रयास गर्दा पनि उनको रक्तश्राव रोकिएन । त्यसपछि उनलाई हिंगोली अस्पतालबाट अर्काे एक निजी अस्पतालमा लगियो । त्यहाँ लगेपछि चिकित्सकहरुको प्रयासबाट रक्तश्राव त रोकियो तर उनलाई निमोनिया देखियो ।
स्वास्थ्य निरन्तर विग्रँदै गएपछि उनलाई भेन्टिलेटरमा राखियो । उनलाई औरंगावाद अस्पतालमा लैजाने तयारी गरिएको थियो । तर औरंगावाद अस्पताल नलैजाँदै दोस्रो सन्तानलाई जन्म दिएको १२ दिनपछि १४ नोभेम्बरमा उनले संसार छाडिन् । हिंगोली जिल्लाका स्वास्थ्य अधिकारीहरुले ज्योतिको मृत्यु भएको पुष्टि गरेका छन् ।
उनी निकै मिलनसार र मेहनती रहेको उनका सहकर्मीहरुले बताएका छन् । उनको सेवा लिने सबैले उनको प्रशंसा गर्ने गर्थे । हेल्थपाटीबाट
Prevवृद्ध अवस्थामा के भयो त्यस्तो ? ७० वर्षका सन्तबहादुरले ५६ वर्षकी श्रीमतीलाई…
Nextयिनै हुन् दुई दिल्लीमा काम गर्ने नेपालीभाषी महिलाको हत्या, मुखमा टेप र हात–खुट्टा बाँधिएको अवस्थामा शव भेटियो
लाखौँ मानिसमध्ये कुनै एकले मात्र देख्छन् यस्तो सपना, तपाईले देख्नुभएको त छैन ?
काठमाडौको कोटेश्वरमै घट्यो यस्तो डरलाग्दो घटना, शंका लागेर हेर्न जादा प्रहरीको उड्यो होस् !